Ogaden News Agency (ONA) – Cabdi Iley iyo Abraha Wolde Oo Albaabada ka Xidhay R/wasaare Desalegn – Noora Afgaab
Cabdi Iley iyo Abraha Wolde Oo Albaabada ka Xidhay R/wasaare Desalegn – Noora Afgaab
Posted by ONA Admin	/ October 10, 2014
“Ma aha Ogadenya oo kali ah meesha qasan ee waa Itobiya oo idil.” Hadalkaa waxaa igu yidhi nin aad ugu dhow xafiiska R/wasaaraha Itobiya Hailemariam Desalegn. Waxaa arintaa si dhab ah u muujiyay Cabdi iley iyo saaxiibkii Jeneral Abraha Wolde oo diiday inay fuliyaan qorshihii dowladda dhexe ee lasoo faray.
Dhamaan xafiisyadii dawladda ee Jigjiga ayaa wada xidhan, nin walbana wuxuu gacanta ku haystay ayuu sii cantoobsanayaa. Cabdi Iley iyo Abraha Wolde waxay si dhab ah asawir uga bixiyeen xaaladda ay ku sugan tahay Itobiya. Dawlad magac u yaal ah oo awoodeeda ay ku kooban tahay inay hawlaha xafiisyada kala socodsiiyaan iyo Jeneno Tigree ah oo dhab ahaan u xukuma dalka. Sidaa daraadeed waxay ku talagalsan yihiin labadaa nin inay qasaan dalka haday noqoto in si qaanuun ah lagaga qaado jagooyinka, sababtoo ah waxay u isu arkaan inay yeesheen Ogadenya.
Socdaalkii dhawaa ee R/Wasaare Hailemariam Desalegn uu ku tagay Washington ayaa la filayay inay wax ka badasho habka ay kooxda xag-jireenka ah ee TPLF-ta u fikirayaan oy u hogaansami doonaan doorashooyinka dalka ka dhici doona sanadka soo socda horaantiisa, taasoo uu M/weynaha Mareykanka Mr. Obama ku adkeeyay in la ixtiraamo codka dadweynaha oo aanay dhicin sidii horey u dhici jirtay. Hasa ahaatee tasarufaadka saraakiisha Tigreega ee kala haysta gobolada ayaa u muuqda mid aan waxba ka badali doonin hab dhaqankii TPLF.